American Idol စင်ပေါ်က ဆွဲချခံရတဲ့ Katy Perry
On May 24, 2018 June 5, 2018 By fairy
American Idol season 16 မှာ ဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Katy Perry တစ်ယောက်ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ စကတည်းကယဉ်သကိုဆိုသလိုပဲ ပွဲအစမှာကတည်းက ပြိုင်ပွဲဝင်ကောင်လေးကို kiss ပေးခဲ့လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာမှမကြာသေး ခုလဲ season finale မှာ မထော်မနန်းတွေလုပ်လို့ စင်ပေါ်ကနေ ဆွဲချခံရပြန်ပါပြီ။ Katy Perry ဟာ American Idol season finale အတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ အထူးဧည့်သည်တော် Becca Kufrin […]
2018 Billboard Icon Award ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ Janet Jackson
On May 21, 2018 June 4, 2018 By fairy
မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Billboard Music Award ဆုပေးပွဲကြီးမှာ Janet Jackson တစ်ယောက်ကတော့ ထူးထူးခြားခြားဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Billboard Icon Award ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ဆုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ သူတို့အနေနဲ့ ဂီတအပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးမှ ပေးတဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။ Janet Jackson ဟာ ပထမဆုံး Billboard Icon Award ကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီးတစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ Edges […]
Music NewsAwardBMAsCelebrityLeaveacomment
No tears left to cry သီချင်းပိုင်ရှင် Ariana Grande ဟာ Jimmy Fallon နဲ့တွဲပြီး Nintendo ကထုတ်ထားတဲ့ labo ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ No tears left to cry ဆိုတဲ့သီချင်းကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Nintendo Labo ဆိုတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ Nintendo က launch လုပ်ထားခဲ့တဲ့ cardboard လေးတွေကိုသုံးပြီး အရုပ်လေးတွေ ကစားစရာလေးတွေချိတ်ဆက်ဆော့ရတဲ့ […]
Music NewsCelebrityPeopleLeaveacomment
Royal Wedding မှာပါဝင်တင်ဆက်ဦးမယ့် Elton John
ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား Harry နဲ့ မင်းသမီးချော Megan Markle တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ အဆိုတော်ကြီး Sir Elton John က ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ်လို့သိရပါတယ်။ မေလ ၁၉ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲဟာ လက်ရှိအချိန်ထိအရွယ်ရောက်ပြီးတော်ဝင်မျိုးဆက်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖြစ်လာပါမယ်။ နောက်ထပ်ဒီလိုမင်္ဂလာပွဲကြုံရဖို့ကတော့ မင်းသားဝီလျံရဲ့သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာမှပဲ ကြုံရတော့မှာပါ။ ဗြိတိန်ပြည်တွင်းမှာသာမက နိုင်ငံတကာကလူတွေပါဝိုင်းပြီးလေးစားချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Diana ကွယ်လွန်ခဲ့စဉ်က “Candle in the Wind” သီချင်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ Sir Elton […]
Cardi B ဘာကြောင့်သူ့ Instagram account ကိုဖျက်သွားခဲ့ရတာလဲ??
On May 14, 2018 By fairy
အရင်နှစ်လောက်ကစပြီး နာမည်တရှိန်ထိုးကျော်ကြားလာနေတဲ့ Cardi B ဟာ rapper Azealia Banks နဲ့ လေလှိုင်းပေါ်မှာအချင်းများပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ Instagram ကို delete လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Instagram ကိုသာ ဖျက်တာမဟုတ်ပဲ Twitter ကိုလဲ private လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ Related Article: Cardi B ဆိုတာဘယ်သူလဲ?? အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့…… ဘာတွေကြောင့်ဆိုတာထက် Cardi B နဲ့ စကားများခဲ့တဲ့ Azealia Banks […]
နာမည်ကျော် Celebrity နဲ့သူတို့မေမေတွေရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေ
On May 14, 2018 June 4, 2018 By fairy
မေလ ၁၃ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံတကာမိခင်များနေ့ဖြစ်ပြီး နေရာအနှံ့မှာလဲ မိခင်များကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေကြောင်းအမျိုးမျိုးဆန္ဒမွန်တွေပြုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ်တွေလိုပဲ ဟောလီးဝုဒ်မှာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်များကလဲ သူတို့ရဲ့ မိခင်တွေအတွက် အမျိုးမျိုးဆုတွေတောင်းခဲ့ကြပြီး သူတို့ရဲ့ မေမေတွေနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ၊ သူတို့မေမေငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးတွေကိုတွဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Myanmargroove ကနေမှ သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးလို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ ဒါလေးကဘယ်သူလဲသိလား? A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on May 13, 2018 at […]
Justin Bieber တကယ်ရင့်ကျက်လာနေပြီလား??
On May 11, 2018 June 4, 2018 By fairy
ဆိုးသွမ်းမှုတွေနဲ့နာမည်မကောင်းခဲ့တဲ့ Justin တစ်ယောက် တကယ်ကို ရင့်ကျက်လာနေပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာကိစ္စတွေအခုတလောတွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Instagram မှာ ဒီလို status တင်ခဲ့တော့ ပိုလို့တောင်မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်ကပုံကိုရှုပါနော်။ A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on May 8, 2018 at 9:54am PDT HEY WORLD THAT GLAMOROUS LIFESTYLE YOU SEE […]
Hello သီချင်းပိုင်ရှင် Adele ဟာ သူ့ရဲ့ အသက် ၃၀ ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို Titanic Theme နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအချို့ကိုသာဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ Adele ဟာ Titanic ဇာတ်ကားထဲကမင်းသမီး Kate Winslet ရဲ့ ကပွဲတက်ပုံစံနဲ့ဂါဝန်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားထဲမှာ နံပါတ်နှစ်လိုက်နေတဲ့ Titanic ဇာတ်ကား released လုပ်တုန်းက အသက် ကိုးနှစ်လောက်ပဲရှိနေဦးမယ့် Adele ဟာ သူငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို အသက် […]
Big bag Hardcore fan တွေရဲ့ အလန်းစား fan art တွေ
On May 4, 2018 By fairy
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက မိတ်ဆက်ပြီး မနေ့က officially released လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Big Bag ရဲ့ သတိရတယ် animated music video လေးဟာ fan တွေအတွက် တကယ်ကို အားရကျေနပ်စေခဲ့တဲ့ AMV လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ (၅.၄.၂၀၁၈ – မနက် ၁၀နာရီ) facebook ပေါ်မှာကြည့်သူပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး share ပေါင်း တစ်သိန်းရှစ်သောင်းကျော်နဲ့ ပန်းပန်နေပါတယ်။ ဒီ […]
America’s Got Talent season 13 ပြန်လာတော့မည်
On May 3, 2018 June 4, 2018 By fairy
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာလဲ America’s Got Talent ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူတွေတော်တော်များလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် မနှစ်တုန်းက season-12 မှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကလေးမလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Darci Lynne Farmer နဲ့ Angelica Hale တို့ကြောင့် မြန်မာမှာ America’s Got Talent ကပိုပြီးနေရာရသွားခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ A post shared by America’s Got Talent – AGT (@agt) on Apr 30, […]
Music NewsVarietyLeaveacomment